Nagu saabsan - Yuncheng Kangda Steel Ball Co., Ltd.
Yuncheng Kangda Steel Ball Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2000 waxayna ku taalaa gobolka Shandong, Shiinaha. Waxay u dhow dahay dekedda Qingdao iyo Tianjin Port, oo ku habboon dhoofinta. Kubadaha birta ah ee loo yaqaan 'Condar steel' ayaa la dhoofiyey ku dhowaad toban sano, badiyaa waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Ameerika, Koonfur Bari Aasiya iyo meelo kale, waxayna ku guuleysteen kalsoonida iyo taageerada macaamiisha adduunka oo idil. Shirkaddu waxay siin kartaa macaamiisha ROHS, REACH, ISO iyo shahaadooyin kale oo shahaadooyin caalami ah si ay u geliyaan dhoofinta.
Maaddaama ay tahay soo saaraha kubbadda birta ah, Condar waxaa ka go'an inay si joogto ah u wanaajiso tayada kubbadaha birta ah, iyadoo la waafajinayo tayada kubbadaha birta ah ee leh alaab tayo sare leh, iyo ku talineysa daabacaadda wax soo saarka qiimaha wax ku oolka ah ee macaamiisha.
In ka badan 20 sano, waxaan soo saarnay kaliya badeecado kubbadeed, kuwaas oo ka xirfad badan sababo la xiriira fikirka keliya. Waxaan inta badan soo saarnaa kubadaha birta ah, kubadaha birta ahama iyo kubadaha birta kaarboon. Qeexitaanka ugu muhiimsan waa 0.3mm-200mm, iyo buundooyinka ugu waaweyn waa G5-G1000. Waan ka shaqeyn karnaa oo aan u habeyn karnaa cabirrada kala duwan ee kubbadaha iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, oo ay ku jiraan kubbadaha daloola, kubbadaha suugada duulaya, kubbadaha korantada lagu dhejiyo, kubbadaha naxaasta ah, kubbadaha aluminium, kubbadaha dhoobada ah iyo kubbadaha dhalada ah, Soo-saarka sanadlaha ah ee kubbadaha caagga ah iyo waxyaabaha kale ee kubbadda ayaa ku saabsan 3 bilyan.
Warshadu waxay daboolaysaa aag ka badan 10,000 oo mitir laba jibbaaran, oo leh boqolaal qalab horumarsan oo kubbadeed bir ah, daraasiin qalabka wax lagu baaro iyo qalab ah, iyo in ka badan tobaneeyo farsamoyaqaanno ah oo toban sano oo khibrad wax soo saar ah leh. Waxaan ku bilaabaynaa iibsashada alaabta ceyriinka ah, si adag u xakameynaa geeddi-socod kasta, ka dhignaa mid tayo leh wax soo saarka la raad-raaci karo, iyo maareynta cilmiyaysan waxay bixisaa dammaanad adag oo soo-saaridda kubbado bir ah oo tayo sare leh
Kubadda birta ayaa ah waxa ugu badan ee aasaasiga ah, waana la adeegsadaa. Waxaa badanaa loo isticmaalaa meelaha lagu dhejiyo, qalabka, qalabka gawaarida, korantada, kiimikooyinka, farsamada gacanta, alaabada balaastigga ah, iwm. Waxay ka jirtaa dhammaanba meelaha wareega.
In ka badan 20 sano, waxaan had iyo jeer u hoggaansameynaa maareynta daacadnimada, ka fikirida waxa ay macaamiishu ka fikiraan, iyo welwelka macaamiisha. Kubadaha birta ah ee loo yaqaan 'Condar steel' waxaa aqoonsaday kumanaan macaamiil ah oo kala jooga dal iyo dibadba, astaanta "Condar" ayaa ku guuleysatay in macaamiisha ay si wada jir ah u amaanaan, waxayna wada shaqeyn sameeyeen sanado badan si ay u gaaraan xaalad guul-guul ah.
Waxaan si kal iyo laab ah u soo dhawaynaynaa booqashadaada. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid kubbadaha birta ah, fadlan la tasho oo waan kuu soo jawaabi doonnaa sida ugu dhakhsaha badan. Emailkeena waa cdballs@cdballs.com.
Mabda 'noo ah: Maaraynta daacadnimada, u isticmaal khibradeena si aan kugula talino badeecooyinka ku habboon uguna kharashka badan macaamiisha.
1.Waxaa la aasaasay sanadkii 2000 iyadoo 20 sano oo khibrad ah xagga wax soo saarka iyo suuqgeynta.
2.Haysashada SGS / ROHS shahaado, dammaanad iyo koox maarayn wanaagsan.
3.Qalabka wax soo saarka horumarsan iyo qalabka baaritaanka.
4.Hantida la xaddiday ka badan 10 milyan RMB.
5.Farsamo yaqaan leh in kabadan 10 sano oo khibrad wax soo saar ahe.
6. Heerka AAAAA heer qaran ee loojistikada sida bakhaarkayaga, Keyd ballaaran iyo gaarsiin degdeg ah.
7. 30% suuqa gudaha mugga iibka aasaas ahaan.
Sumcad 8.High, Macaamiil badan oo ka kala yimid adduunka oo dhan.
Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan la dhisno iskaashi macaamiil kasta waqti kasta.